Verenga Raymond weTououse - Crusader
History & Culture Vanhu Vanokosha & Zviitiko
Mukuru uye ane simba kupfuura vose vatungamiri vekutanga
Raymond weTououse aizivikanwawo se:
Raymond weSaint Gilles, Raimond de Saint-Gilles, Raymond IV, Count of Toulouse, Raymond I we Tripoli, marquis yeProvence; uyewo spelled Raymund
Raymond weTououse aizivikanwa ne:
Kuva mutungamiri wokutanga kutora muchinjikwa uye kutungamirira hondo muKutanga Kwekutanga. Raymond aiva mutungamiri anokosha wemauto eChristose, uye akabatanidzwa mukubatwa kweAndiyoki neJerusarema.
Nzvimbo dzeDzimba uye Ichinetso:
Akaberekwa: c. 1041
Andiyoki yakatorwa: June 3, 1098
Jerusarema rakabatwa: July 15, 1099
Akafa: Feb. 28, 1105
Raymond akaberekerwa ku Toulouse, France, muna 1041 kana 1042. Paakatora chikamu ichocho, akatanga kuunganidzazve madzitateguru ake, ayo akanga arasikirwa kune dzimwe mhuri. Mushure memakore makumi matatu, akavaka nheyo huru yekumaodzanyemba kweFrance, kwaakanyora matare gumi nemaviri. Izvi zvakaita kuti ave nesimba kupfuura mambo.
MuKristu akazvipira, Raymond aiva mutsigiri wakasimba wemapapuriro epapa ayo Papa Gregory VII akanga atanga uye kuti Urban II yakaramba ichienderera mberi. Anotenda kuti akarwisana muReconquista muSpain, uye angangodaro akaenda kunofambira kuJerusarema. Papa Urban paakaita kudana kwake kuChrisade muna 1095, Raymond ndiye mutungamiri wekutanga kutora muchinjikwa. Makore apfuura makumi mashanu apfuura uye achifunga kuti vakwegura, nhamba yakasiya nyika yaakanyatsogadzirisa zvakasimba mumaoko emuwanakomana wake uye akazvipira kuenda rwendo rwakaoma kuenda kuNzvimbo Tsvene pamwe nemudzimai wake.
Munyika Tsvene, Raymond akaratidza kuva mumwe wevatungamiri vanobudirira veKutanga Kwekutanga. Akabetsera kutora Antiokia, ndokubva atungamirira mauto kuenda kuJerusarema, kwaakabatanidzwa mukukomba kwakabudirira asi akaramba kuramba ave mambo weguta rakakundwa. Gare gare, Raymond akatora Tripoli ndokuvaka pedyo neguta imba yeMons Peregrinus (Mont-Pélerin).
Akafira ikoko munaFebruary, 1105.
Raymond akanga asiri ziso; kuti akarasikirwa sei iyo inoramba iri nyaya yekufungidzira.
Zvimwe Raymond we Toulouse Resources:
Mufananidzo weRaymond weTououse
Raymond weTououse muChinyorwa
Kungobatanidzwa pasi apa kunokutora iwe kuchitoro chekudhinda paIndaneti, kwaunogona kuwana humwe ruzivo pamusoro pebhuku kuti ikubatsire kuitora kubva kuraibhurari yako yekumba. Izvi zvinopiwa sechinhu chakanaka kwauri; kana Melissa Snell kana Nezvazvo ndiye ane mhosva yekutenga kupi zvako kwaunoita kuburikidza nehukama huno.
naJohn Hugh Hill uye Laurita Lyttleton Hill
Raymond weTououse paWebhu
Raymond IV, weSaint-Gilles
Brief bio paCatholic Encyclopedia
Index by Professional, Achievement, kana Basa muSosaiti
Nyaya yemagwaro aya ndeyekubhabhatidzwa © 2011-2016 Melissa Snell. Iwe unogona kukopa kana kudhinda rugwaro urwu nokuda kwekushandisa iwe pachako kana kuchikoro, chero bedzi URL iri pasi inowanikwa. Chibvumirano hachibvumirwi kubereka rugwaro urwu pane imwe webhusaiti. Pamusana pemvumo yekubudisa, tapota taura naMelissa Snell.
I URL yebhuku iyi ndeyikuti:
Biography yaLenny Bruce
32 Ronald Reagan Quotes Unofanira Kuziva
China Boxer Rebellion ye 1900
A Biography of Theodore Roosevelt, Mutungamiri wemakumi maviri nematanhatu weU.S.
Vakakurumbira Vakaroorana Vakaparadzana
Nhoroondo yeMarilyn Monroe
Biography yaJim Thorpe
Vanhu Vakakurumbira Vezana remakore rechi20
Mhedziso Yezviitiko Zvikuru zveHondo Yenyika II
Mhemberero yekupedzisira yeMUMENGER
Nzira Yokudhonza Sei Cat muColored Pencil
ChiGermany Zviratidzo Zvenguva Dzose - Nguva Dzekare
Pasi Echinoderms: Gungwa Urchins uye Sand Sand Dollars
Kudzidzisa Unyanzvi hweZvamwe
Mutemo wegumi nemakumi matatu nematatu: Zvitatu uye zvikamu zvina (Mitemo yeGolf)
Ndima dzeBhaibheri pakunzwa Mwari
Zvinoreva Zvechokwadi Mazuva gumi nembiri eKrisimasi
Rotary Rock Tumbler Mirayiridzo
Comic Geniuses Yakaenda Kukuru Pfupi
IchiGiriki Mwari Poseidon, Mambo weGungwa
Teen Libra - Zodiac Signs
Zuva Rokuseka Mazano kuKiraji Vadzidzi
Sangana naMutumwa Mukuru Chamuel, Angel of Peaceful Relationships
Nzira Yokuchengetedza Sei Snowboard Yenyu Pakati peSvondo
Best Quotes Thanksgiving
Chinese Wedding Wedding - Engagement
Kubudirira kweAmerica: Major General Benedict Arnold
Hondo Yenyika I / II: Lee-Enfield Rifle
Ndeipi Mutauro Unobva Kubva?
Nhoroondo Pfupfupi yeHurumende Inobatanidza muAmerica Economy
Beethoven's Love Letter - Mudiwa Wangu Wokusingaperi
Hofstra University Admissions